सेक्स गर्दा यो कुरा गर्नुस्, सन्तुष्टि तपाइको पोल्टामा ! – Everest Dainik – News from Nepal
एभरेष्ट स्वास्थ्य । सेक्स, एउटा अनुभूति, एउटा क्रिया । एउटा विज्ञान । यसलाई सही ढंगले बुझेर सोही अनुरुप व्यवहार गर्न सकियो भने यो बरदान बन्छ ।
तर, सेक्सलाई सही किसिमले ग्रहण नगर्दा यसले नै कैयन जिन्दगी बर्बाद समेत गरेको हुन्छ ।
मनोविज्ञ भन्छन– सेक्सले मानिसका आम व्यवहारलाई निर्देशित गरेको हुन्छ । अर्थात् यौनक्रियासँग जोडिएका हर्मोनहरुले मानिसका अन्य संवेदना समेत प्रभावित गर्दछ ।
उदाहरणका लागि, लामो समयसम्म यौनसम्बन्धमा सक्रिय नहुने जोडी मानसिकरुपमा तनावमा या चिडचिडापन हुने, या झर्किने या भनौं अरुसँग कुरा नमिल्ने खालको हुन्छन । सेक्सको यो मनोविज्ञानलाई सही अर्थमा बुझ्न सकियो भने जीवन सुखमय बन्छ ।
त्यसो भए कसरी बुझ्ने त ? यसका लागि तपाईले आफूलाई बिर्सिनुस् । तपाईले के चाहनुहुन्छ बिर्सिनुस । आफ्नो जीवन साथी या पार्टनर कुन मनस्थितिमा छ, उसले के खोजेको छ ? उसलाई अहिलेको सम्बन्ध कस्तो लाग्न सक्छ ? यदि पार्टनर श्रीमती या श्रीमान छैन भने झन बढी यो कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।
यो कुरा तपाईले बुझ्नु भयो भने सोही अनुरुप पार्टनरसँग व्यवहार गर्नुस ।